ဂျာမဏီရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနခန့် မှန်းချက်
ဂျာမဏီရဲ့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနခန့် မှန်းချက်ဒေတာသည် ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေကိုပြဆိုတဲ့ဒေတာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ထိုဒေတာသည် ယူရိုငွေကြေးအပေါ်သက်ရောက်မှုပြင်းပါသည်. ဒေတာကိန်းဂဏန်းများကောင်းမွန်ပါက စီးပွားရေးအခြေအနေကျတက်လာတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပြီး ကိန်းဂဏန်းများကျဆင်းသွားပါက စီးပွားရေးအခြေအနေကျဆင်းသွားတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်.
နောက်ဆုံးစီးပွားရေးအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတော့ 109.9 ကနေ 110အထိတောင် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်.ထိုကိန်းဂဏန်းဟာ ၂၀၁၁ သြဂုတ်လနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးဒေတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်. ထိုဒေတာအရ ဂျာမဏီနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေဟာ ကောင်းမွန်တိုးတက်လာတယ်လို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်. ထိုတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကို ယခုထွက်ရှိမည့်ဒေတာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီး အတည်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်. ထိုဒေတာသည် ယူရိုငွေကြေးအပေါ်သက်ရောက်မှုပြင်းပါသည်. ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေရှိနေတဲ့အတွက် ယူရိုငွေကြေးဈေးကွက်ကတော့ အေးနေမယ်လို့်ခန့်မှန်းရပါတယ်.